Y Nooca Mashiinka Mashiinka, Shirkadaha Alaabada - Shiinaha Y Nooca Soosaarayaasha Qalabka
7901 Grooved Dhammaadka Y-Strainer
Noocyada sooca ah ee loo yaqaan 'NPT' ama 'BSPT blowoff outlet' oo ku yaal daboolka. Dukaanada loo yaqaan 'Blowoff' ayaa lagu dhammeeyay fiilooyin. Shaashaduhu waa daloollan yihiin 304 bir bir ah oo aan lahayn oo leh shabag tolmo leh. Kursiga nasashada ee jirka wuxuu hubiyaa isku toosinta shaashadda. Cabbirada 'Groove' waxay u hoggaansamaan heerka Metric ama AWWA C606. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 16 bar / 250 psi oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C. Ilaalinta daxalka Fusion daahan xidhan ama dareeraha epoxy rinji gudaha iyo dibedda. ...
7701 Mawduucyada Dhamaadka Y-Strainer
Faahfaahin NPT ama BSPT soo saarista alaabada daboolka. Dukaanada loo yaqaan 'Blowoff' ayaa lagu dhammeeyay fiilooyin. Shaashaduhu waa daloollan yihiin 304 bir bir ah oo aan lahayn oo leh shabag tolmo leh. Kursiga nasashada ee jirka wuxuu hubiyaa isku toosinta shaashadda. NPT ama Metric thread ayaa dhammaanaya. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 25 bar / 300 psi oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C. Ilaalinta daxalka Fusion daahan xidhan ama dareeraha epoxy rinji gudaha iyo dibedda. Qeexitaanka Waxyaabaha jirka ca ...
7103 Y-Strainer nooca
Faahfaahin ilaha BSPT ee ka baxa daboolka. Dukaanada loo yaqaan 'Blowoff' ayaa lagu dhammeeyay fiilooyin. Shaashaduhu waa daloollan yihiin 304 bir bir ah oo aan lahayn oo leh shabag tolmo leh. Kursiga nasashada ee jirka wuxuu hubiyaa isku toosinta shaashadda. Flanged iyo qodista waafaqsan yahay EN1092-2 PN16 / 25. Weji ka waji cabbir waafaqsan taxanaha DIN3202 F1. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka 16 bar oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C oo loogu talagalay DN50 ilaa DN600. 25 bar oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C oo loogu talagalay DN50 ilaa DN300. Corrosi ...
7101 Y-Strainer nooca
Noocyada sooca ah ee loo yaqaan 'NPT' ama 'BSPT blowoff outlet' oo ku yaal daboolka. Dukaanada loo yaqaan 'Blowoff' ayaa lagu dhammeeyay fiilooyin. Shaashaduhu waa daloollan yihiin 304 ahama oo steewith dhibic leh oo tollan leh. Kursiga nasashada ee jirka wuxuu hubiyaa isku toosinta shaashadda. Flanged iyo qodista u hoggaansamaysaa EN1092-2 PN16 / 25; ANSI B 16.1 Fasalka125. WRAS waa la ogolaaday: FIG.7101 DN50-DN600 DI jirka, gogosha EPDM ee biyaha la cabi karo. Cadaadiska Shaqada iyo Heerkulka FIG.7101: 16 bar / 200 psi oo lagu qiimeeyay -10 ° C ilaa 120 ° C DN50 ilaa DN600. ...
Nooca GLSY-16 nooca jiidaya shaandhada isku darka
Soo bandhigida Alaabta Faahfaahinta Dhismaha GLSY- 16 nooca shaandhada isku dhejiska ah wuxuu la mid yahay nooca GL (y) miiraha, kaliya ku dar xirmo isku dar ah iskudarka isku dhafka ah ee dheeriga ah, aragtida ka-reebitaanka wasakhda ayaa la mid ah shaandhada nooca GL (y), waxay ku habboon tahay rakibida Xaashida cabbirka Dibadda DN (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 300 L 300 350 400 450 500 550 650 775 900 H 130 165 195 230 300 335 420 500 580
GL (Y) -16 shaandhada nooca
Hordhaca badeecada GL (Y) miiraha nooca loo isticmaalo biyaha, saliida, dhuumaha gaaska iyo noocyada kala duwan ee qalabka, badanaa waxay ka reebtaa qoraalada gudaha dhuumaha si loo ilaaliyo waalka gargaarka, waalka sii deynta cadaadiska, biyaha, waalka iyo bamka iwm sida caadiga ah baaritaanka isticmaalka biyaha korsado 10 ~ 30 godad / c m2, shaashadda isticmaalka gaaska waxay qaataan 40-100 godad / c m2, shaashadda isticmaalka saliida waxay korsataa 60- -200 god / cm2. Halbeegyada Farsamada 1. Cadaadiska shaqada: 1 .6MPa 2.Teat preci ...